Israel waxay dib u soo celineysaa waajibaadka maaskaro 10 maalmood uun ka dib markii ay xaaqday xayiraadaha COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Israa’iil Wararka Jebinaya » Israel waxay dib u soo celineysaa waajibaadka maaskaro 10 maalmood uun ka dib markii ay xaaqday xayiraadaha COVID-19
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Israa’iil Wararka Jebinaya • News • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Shopping • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Israel ayaa dib u soo celineysa shuruudda maaskaro 10 maalmood uun ka dib markay xaaqday xayiraadaha COVID-19
Saraakiisha caafimaadka ee Israel waxay ka baqayaan in noocyada faafa ee Delta, oo markii ugu horreysay laga helay Hindiya, ay ka dambeeyaan tirada kiisaska sii kordhaya, maaddaama dabeecadeeda aadka loo gudbin karo ay ka dhigan tahay inay si dhakhso leh ugu faafi karto dadweynaha, taasoo khatar gelinaysa caafimaadka shakhsiyaadka aan la tallaalin.
Go'aanka Israel ee ku noqoshada waajibaadka maaskaro 10 maalmood ka dib markii la qaaday ayaa loo arki doonaa inay dhabar jab ku tahay dowladda dalkaas.
Israel ayaa diiwaan galisay 227 kiis oo cusub oo ah COVID-19 khamiistii inkasta oo qaranku guulaystay talaalkiisii.
Xarun cusub oo lagu tijaabiyo COVID-19 oo laga hirgaliyay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Ben Gurion si loo xadido halista noocyo cusub oo dalka la keenayo.
Kaliya 10 maalmood kadib markay joojisay xayiraadaha COVID-19, mas'uuliyiinta Israa'iil waxay dib ugu soo celiyeen shuruud qasab ah oo lagu daboolayo dhammaan meelaha dadweynaha.
Go'aanka ayaa waxaa shaaciyey idaacada dadweynaha madaxa gudiga jawaab celinta ee Israel COVID-19, Nachman Ash, walaac laga qabo in "cudurada faafa ay ku faafayaan" wadanka oo dhan, iyadoo tirada kiisaska "ay sii laba jibaarmayaan maalmo yar."
"Waxaan leenahay magaalooyin badan oo ay tiradoodu sii kordheyso iyo bulshooyin ay kiisaska ka socdaan," Ash ayaa ka digay bayaankiisa.
Sida laga soo xigtay saraakiisha dowladda, Israa'iil ayaa duubay 227 xaaladood oo cusub oo ah COVID-19 khamiistii inkasta oo tallaalkii guusha ee qaranku guulaystay.
Go'aanka Israel ee ku noqoshada waajibaadka maaskaro 10 maalmood ka dib qaadista ayaa loo arki doonaa dhabar jab ku ah dowladda dalkaas, oo loo arkay inay waddo mid ka mid ah barnaamijyada tallaalka ugu guulaha badan adduunka, iyada oo ugu yaraan hal qiyaas qaadatay 80% dadka waaweyn .
Si kastaba ha noqotee, in kasta oo dib u dhacu jiro, Ash way cadahay in saraakiisha caafimaadku wali "rajeynayaan in talaalku naga ilaalin doono kor u qaadida isbitaalada iyo kiisaska adag."
Iyada oo dadka reer Israel ay u dabaaldegayaan hanka isbuucaan, wasaaradda caafimaadka ayaa ugu baaqday muwaadiniinta inay markale, xirtaan waji-furka meelaha banaanka. Safarka sanadkaan ee loo marayo Tel Aviv ayaa la filayaa inay isugu yimaadaan tobanaan kun oo qof, iyadoo sanadkii hore loo baajiyay cudurkan faafa.
Raiisel wasaaraha dhawaan la magacaabay, Naftali Bennett, ayaa uga digay Israelisk "dillaaca cusub" horraantii toddobaadkan, iyagoo ka aasaasay xarun cusub oo tijaabinta COVID-19 Garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Ben Gurion in la xaddido halista noocyo cusub oo dalka la keenayo. Tan waxaa lagu lammaaneeyey ogeysiis maalintii Arbacada ee ahayd in Israa’iil ay dib u dhigeyso qorshayaasheeda ah inay dalkeeda dib ugu furto dalxiisayaasha caalamiga ah.